DemoChimp: Qalabayntaada Demo | Martech Zone
DemoChimp hadda wuxuu kujiraa beta xiran laakiin wuxuu raadinayaa ururo daneynaya inay adeegsadaan adeegooda. DemoChimp wuxuu shaqsiyeeyaa muuqaalka sheyga, kordhinta heerka beddelka websaydhkaaga iyo saamigaaga dembi-u-xidhka inta lagu guda jiro hawsha iibka, dhammaantoodna intaad soo uruurinayso Analytics. DemoChimp wuxuu si otomaatig ah u qaabeeyaa demo ka jawaab celinta baahiyaha gaarka ah ee rajo kasta, sida khabiir iibiyaha.
Astaamaha DemoChimp iyo Faa'iidooyinka:
U Bedelo booqdeyaal badan hogaamiyaasha - Soo booqdayaasha websaydhkaaga ayaa isdiiwaangelin doona inta badan markay la falgalaan waxyaabaha shakhsiga ah. Marka macdantaadu soo gasho, waad arki kartaa qaybaha badeecadaadu muhiim u ahayd iyaga iyo qaybaha aan ahayn sidaa darteed waxaad u habeyn kartaa dabagalkaaga.
Mashiinka Demo ee Caqliga leh - Weligaa ma maqashaa codsiga, "Miyaad ii soo diri kartaa demo?" Hadda waad awoodi kartaa, oo DemoChimp si otomaatig ah ayuu u hagaajiyaa demo-ga maaddaama ay ka jawaabeyso danaha rajada, adoo shakhsi ahaan uga dhigaya sida iibiyaha nool. Waxa kale oo aad arki kartaa cidda ay la wadaageen demo ururkooda si aad u ogaato oo aad u dhex gasho dhammaan guddiga wax iibsiga.
Soo Gal Falanqaynta Demo (Demolytics ™) - Muuqaalka gadaashiisa, DemoChimp wuxuu uruuriyaa xog qiimo leh oo ku saleysan jawaabaha rajada iyo ficilada inta lagu gudajiro demo. Waxaan ugu yeernaa Demolytics-ka ™. Soo gal kuwan Analytics iyada oo loo marayo shaashadda ama layliga illaa rajo gaar ah.
Tags: barnaamijka demomadal demodemochimpdemosmadal bandhiga alaabtabadeecadahaiibka demobandhig iibka
Oktoobar 15, 2013 at 8:24 PM
Waad ku mahadsan tahay tan. Waxaan ka mid ahay koox bilow ah oo aan iskaashi la yeesho adeeg bixiye farsamo bilaabis ah waxay faa'iido u yeelan kartaa labada dhinacba.